Storm radar: yintoni na, yintoni na kunye nokubaluleka | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 03/01/2022 09:47 | Iziganeko zemozulu
Kule mihla, ngenxa yobugcisa obuphuhliswa yonke imihla, umntu unokuqikelela imozulu ngokuchaneka nangokuchaneka ngakumbi. Esinye sezixhobo zobuchwepheshe bokwenza uqikelelo lwemozulu yi isaqhwithi radar. Njengoko igama layo libonisa, inokusinceda siqikelele ukuba ngamafu angqingqwa kwaye angazinzanga ngokwaneleyo ukuze kubangele izaqhwithi.
Kweli nqaku siza kuchaza yonke into oyifunayo ukuba uyazi malunga ne-storm radar, ziziphi iimpawu zayo kunye luncedo.
1 Yintoni isiphango radar
2 Sisebenza njani isitshingitshane seRadar
3 Imbali kunye nokusetyenziswa kwexesha elidlulileyo
4 Ukubaluleka kwisicwangciso senqwelomoya
Yintoni isiphango radar
I-storm radar sisixhobo esikhulu esiquka inqaba eyi-5 ukuya kwi-10 yeemitha ukuphakama kunye nedome ejikelezayo egqunywe ngomhlophe. Kukho amacandelo amaninzi (ii-antenna, iiswitshi, ii-transmitters, abamkeli ...) ezenza irada yale dome ngokwayo.
Iisekethe zokusebenza ze-radar zivumela ukuqikelela ukusasazwa kunye nobukhulu bemvula, mhlawumbi ikwimo eqinileyo (ikhephu okanye isichotho) okanye ikwimo engamanzi (imvula). Oku kubalulekile kuphononongo lwemozulu kunye nokucupha, ngakumbi kwezona meko zibuthathaka, ezifana nezaqhwithi ezinamandla kakhulu okanye iimvula ezinkulu, apho kukho amabhanti emvula anamandla kwaye angatshintshi, oko kukuthi, xa imvula eninzi iqokelelana kwindawo enye kwindawo enye. ixesha elifutshane.
Sisebenza njani isitshingitshane seRadar
Umgaqo wokusebenza we-storm radar usekwe ekukhutshweni kwemitha yohlobo lwe-microwave. Le mitha okanye i-pulses ye-radiation ihamba emoyeni ngendlela yeelobe ezininzi. Xa i-pulse idibana nomqobo, inxalenye ye-radiation ekhutshwayo iyahlakazeka (ihlakazekile) kuzo zonke iinkalo kwaye inxalenye ibonakala kuzo zonke iindlela. Inxalenye yemitha ebonakaliswe kwaye isasazwe kwicala le-radar luphawu lokugqibela olufumanayo.
Inkqubo ibandakanya ukwenza ii-pulses ezininzi zemitha, okokuqala ngokubeka i-eriyali ye-radar kwi-engile ethile yokuphakama. Nje ukuba i-angle yokuphakama ye-eriyali isetiwe, iya kuqalisa ukujikeleza. Xa i-eriyali ijikeleza yodwa, ikhupha imithambo yemitha.
Emva kokuba i-antenna igqibe ukuhamba kwayo, inkqubo efanayo iyenziwa ukuphakamisa i-antenna kwi-angle ethile, njalo njalo, ukufezekisa inani elithile lee-angles zokuphakama. Le yindlela ofumana ngayo okubizwa ngokuba yi-polar radar data - iseti yedatha yeradar ebekwe emhlabeni kwaye phezulu esibhakabhakeni.
Isiphumo senkqubo yonke Kubizwa ngokuba sisikena sesithuba kwaye kuthatha malunga nemizuzu eli-10 ukugqiba. Uphawu lwee-pulses ze-radiation ezikhutshwayo kukuba kufuneka zibe namandla kakhulu, kuba uninzi lwamandla akhutshwayo lulahlekile kwaye inxalenye encinci yomqondiso ifunyenwe.
Isithuba ngasinye sokuskena sivelisa umfanekiso, ekufuneka uqwalaselwe phambi kokuba usetyenziswe. Olu lungiso lomfanekiso lubandakanya ukulungiswa okuhlukahlukeneyo, kubandakanywa nokususwa komhlaba owenziwe ngemiqondiso yobuxoki, oko kukuthi, ukususwa kwemiqondiso yobuxoki eyenziwe yintaba. Ukususela kuyo yonke inkqubo echazwe ngasentla, umfanekiso wenziwa obonisa intsimi yokubonakalisa i-radar. Ireflectivity ngumlinganiselo wobungakanani begalelo lamandla ombane we-electromagnetic kwi radar ukusuka kwithontsi ngalinye.
Imbali kunye nokusetyenziswa kwexesha elidlulileyo
Ngaphambi kokuveliswa kwerada yemvula, uqikelelo lwemozulu lwalubalwa kusetyenziswa iiequation zemathematika, yaye izazi ngemozulu zazinokusebenzisa iiequations zemathematika ukuqikelela imozulu. Ngeminyaka yee-1940, iirada zazisetyenziselwa ukujonga iintshaba kwiMfazwe Yehlabathi II; ezi radar zihlala zifumanisa iimpawu ezingaziwayo, ezibizwa ngokuba yiYufeng ngoku. Emva kwemfazwe, izazinzulu zafunda isixhobo kwaye zayiguqula yaba yinto esiyaziyo ngoku njengemvula kunye / okanye irada yemvula.
I-Storm radar lutshintsho kwimeteorology: pivumela amaziko amakhulu emozulu ukuba afumane ulwazi lokuqikelela, Kwaye unokuqonda kwangaphambili amandla elifu, kunye nendlela yalo kunye nokuma. , Umlinganiselo kunye nokuba nokwenzeka kokubangela imvula.
Ukuchazwa koqikelelo olunikezwa yi-radar yemvula inzima, kuba nangona ingaphambili kwi-meteorological community, i-radar ayiboneleli ngedatha ethile kumgama, kwaye kunzima ukwazi indawo echanekileyo ekujoliswe kuyo yemeteorological. Olu lulwimi oluthethwayo.
Ukwenza ezona ngqikelelo zichaneke kakhulu, izazi ngemozulu zihlolisisa iintshukumo ezinokubakho ukuya phambili. Xa ukukhanya kwelanga kubetha emafini, ukuphindaphinda kwamaza ombane aphuma kwiradar, nto leyo esivumela ukuba siqonde iimpawu zemvula ezinokubakho.
Ukuba utshintsho lulungile, iindlela zangaphambili kunye nokwenzeka kwemvula iya kwanda; kungenjalo, ukuba utshintsho olungalunganga, i-front iya kuhla kwaye amathuba okuba nemvula iya kuncipha. Xa lonke ulwazi olusuka kwirada lugqithiselwa kumfanekiso wekhompyuter, imvula yangaphambili iya kuhlelwa ngokokuqina kwemvula, isichotho okanye ikhephu ... Uluhlu lwemibala lubekwa ukusuka ebomvu ukuya eluhlaza okwesibhakabhaka ngokobunzulu bemvula. .
Ukubaluleka kwisicwangciso senqwelomoya
Into yokuqala yokuthetha kukuba i-radar yemozulu sisixhobo sokujonga, kungekhona isixhobo sokubikezela, ngoko iyasibonisa. imeko yokuna kwemvula (tshayela) xa idatha iqokelelwa.
Nangona kunjalo, ngokubona indlela imvula enkulu eguquka ngayo ngokuhamba kwexesha, sinokuthi "siqikelele" indlela yokuziphatha kwayo kwixesha elizayo: ingaba iya kuhlala isendaweni? Ngaba iya kuhamba indlela yethu? Okubaluleke ngakumbi, ngaba sinokucwangcisa iinqwelomoya ukuphepha iindawo ezinezaqhwithi ezinkulu kunye nemvula?
Idatha eqokelelwe yi-radar iboniswe kwiifomathi ezahlukeneyo zokubonisa. Okulandelayo, siya kuchaza imiba emibini ebalulekileyo yokucwangcisa indiza kwaye sibhekiselele komnye umxholo othi zikwatsalwa kwimilinganiselo yerada yeDoppler.
Njengoko ubona, iradar yesaqhwithi iluncedo kakhulu kuqikelelo lwemozulu kwaye inokusinceda ngokucwangcisa inqwelomoya. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga ne-storm radar kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Iziganeko zemozulu » Isaqhwithi radar